Umsakazi uzimisele ngempumelelo | News24
Umsakazi uzimisele ngempumelelo
ISITHOMBE : lethiwe makhanyaUSboniso ‘Kideo’ Zulu (kwesobunxele) kanye no-Andiswa Mchunu othi ufuna ukukhula endimeni yezokusakaza.
UMFUNDI wezindaba nophinde abe nohlelo lokusakaza esiteshini somsakazo womphakathi uMnu Andiswa Mchunu uthi ukukhuliswa umama kuphela ngaphandle kukababa ikona okumukhuthazile ukuba azimisele aphinde asebenze kanzima ekwenzeni isiqiniseko sokuthi ulandela amaphupho akhe.
UMchunu uqale ukungena emkhakheni wokufunda izindaba emsakazweni i-KZN Capital 104 ngonyaka wezi-2014. Ube esejoyina uMgungundlovu FM ngonyaka owedlule nokuyilapho egcine esethola khona indawo yokusakaza uhlelo Indlov’iyosithela ehambisana noSboniso ‘Kideo’ Zulu njalo ngoLwesine kusuka ngehora lesithathu kuya kwelesithupha (3 pm-6 pm).
Ekhuluma ne-Echo uMchunu uthe ngesikhathi ekhetha umkhakha wokuba intatheli efunda izindaba emsakazweni akakaze azitshele ukuthi ngelinye ilanga uyoke abe ngumsakazi.
“Ngaphambi kokuba ngijoyine uKideo ngaqala ngaba umsakazi ovakashile ohlelweni lwasekuseni noFika Mbatha nokuyilapho engaqala khona nami ukuzibona ukuthi ngingakwazi ukungena kuwona lo mkhakha. Ngesikhathi ngiqhubeka ngifunda izindaba abantu abaningi bebehleli bekhala ngezwi lami ukuthi lingakulungela ukuba ngibe umsakazi.
“UKideo uyena-ke owabe esengimema ukuba ngimujoyine ekusakazeni uhlelo lwangoLwesine. Kwangijabulisa kakhulu loku ngoba kuyakhombisa ukuthi ngiyakhula kulo mkhakha wezemisakazo kanti futhi kusho ukuthi abantu bayakubona ukusebenza kwami kanzima,” kubeka yena.
UMchunu uthe uzimisele ngokuthi aqhubeke afunde kulo mkhakha ukuze ezokhula akwazi ukuthi agcine esesebenza nakweminye imisakazo emikhulu.
“Ukukhuluma nabantu abaningi vele into engiyijwayele ngoba ngesikhathi ngikhula bengihleli ngibizwa ukuthi ngibe umphathi wohlelo emicimbi eyahlukene. Ngicabanga ukuthi naloko kwangisiza kakhulu ekutheni ngingabi umuntu onamahloni.
“Ngiyawuthanda umsakazo kanti ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngigcine sengisakazela imisakazo emikhulu. Kodwa noma kunjalo ukuba umfundi wezindaba kuyohleli kusenhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi,” esho.
Ubonge uMnu Muzi Sibiya nongumphathi siteshi uMgungundlovu FM ngokumnikeza ithuba nokukholelwa kuyena namaphupho akhe.